Dadku Sheeko Kalle Daa!!!!! Qalinkii: Mustafa Sh. Cumar Macalin Geedi | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Dadku Sheeko Kalle Daa!!!!! Qalinkii: Mustafa Sh. Cumar Macalin Geedi
Xaddiyo waxa da’deedu baarka ka goysay 30 sanaddood. Mudaddaa nolosheedu soo taxneyd inta maalmood ee dareen faraxdeed wajigeeda laga dheehday-ba waa ay tirsan-yihiin. Sababtuna waa wehel la’aan bariinsatay iyo asal ahaan tarankeedu meesha uu ku arrooro oo ay garan la’ayd todobaadkan ka hor. Sanadihii hore ee nolosheeda, 1987-kii aan idhaahdo’e, ayaa Abaheed ka mid-noqday boqolaal rag ah oo goor habeenimo laga ururiyay guryahoodii. waa magaaladda Muqdisho xaafado ka mid ahe garro, Islamarkaana dib raq iyo ruux wax sheegaya ninkaas lama arrag. Sidoo kale, hooyadeed billo ka dib marka aabeheed lala guddayo ayaa xaqii u yimi oo ay geeriyootay, Xadiyo ayaan-daran xiligu kaday oo dhiban iyo qumayo reerka ba’iisa habeen darran u dhalatay mid loo arkay-ba, waxay noqotay Laba Jir kaligeed ah oo aan ehel loo geeyo iyo cid korinteeda lagu haleeyo mid-na loo aqoon. Haweenkii xaafaddaha jaarka la ah guriga Xaddiyo ku kaliyaysatay midkood ayaa todobaadkii tacsida hooyadeed lagu jiray isku xilqaantay oo haysay Ilmahan yar, maadaama qayska inantan yar dhalay ee iska daba-tagay ay gurrigan muddo kooban ku jireen waxa dariskii ku adkaatay inay aqoonsadaan ama hellaan ehelkii iyo qaraabadii reerkan Xadiyo ka tagay si ay ugu geeyaan xogta qoyskaa daaha loo rogay, islamarkaana ugu dhiibaan inanta yar ee ka hadhay. Sidaa darteed, markii danbe waxa xaafadihii dariska ahaa go’aansadeen in la geeyo xeryaha dawladu ubaddka ku koriso, Dhacdooyinkan oo dhan dan kama laha Xaddiyo, taasina waa garteed oo waa dhalaan dareenkii tabaalaha haysta is weydiin lahaa ka madhan. Ogaal la’aantaase kumma sii jirin, waqtigaasina ma noqon xiligii ugu danbeeyay ee duruufo kalli-nimo hadheeyaan nolosheedda, laakiin sanaddo ka dib waxa burburtay dawladii gacanta loo geliyay ee korinteeda lagu haleeyay. Waa 1991-kii, waa sanadkii shanaad ee ay tirsato, hadda ayuunbay kala baratay magacyadda carruurta ay la joogto iyo kuwa ay yihiin, waxay dareentay inay ka duwan-tahay Ubadka kale ee guryaha qoysasku caadiyan ugu dhaqan-yihiin ka soo toosay, laakiin taasi lur kumma hayso, waayo waxa loo sheegay in ay yihiin ubaxii Kacaanka, wax intaa dhaafsana iyana isma weydiin karrto cid kalana kuma wargelin oo umma bisla, waxa xiisaynaysaa ciyaaraha ay la waddaagto caruurta ay xaradda ku wadda jiraan oo lagu wacdiyo inay ehel iyo aqrababa isu yihiin, laakiin taasi ma dhaqi karrto ilmo ku nool deegaan Af-soomaali lagaga haddlo, magaaladii camirayd shalay ayaa maanta colku is weydaaranayaa, caasimaddii dalka ayaa isu rogaysa xaruntii Tuuga iyo Dilaaga.